Ra’iisal Wasaare Saacid oo faah faahin dheer ka bixiyay Waxqabadka Xukuumada ee mudada 55-ta maalmood ee ay jirtoþ | Somalisan.com Home
Ra’iisal Wasaare Saacid oo faah faahin dheer ka bixiyay Waxqabadka Xukuumada ee mudada 55-ta maalmood ee ay jirtoþ
1/12/2013 7:16:00 A
Maanta waa maalintii 55-aad ee Xukuumadda Isbedel-doonka ah ee Soomaaliya ka dhalatay, Baarlamaankuna ansixiyay November 16, 2012, Xubnaheeda iyo Barnaamijkeeda Waxqabadka”. Ra’iisal Wasaaraha Xukuumada Federaalka Soomaaliya Mduane Cabdi Faarax Shirdoon “Saacid” ayaa galabta Warbaahinta Shir jaraa’id ugu qabtay xafiiskiisa, isaga oo faah faahin dheer ka bixiyay waxqabadka Xukuumada ee mudada 55-ta maalmood ah ee ay jirtay, waxana uu si gaar ah diirrada ugu saaray Midnimada iyo Wadajirka ka dhaxeeya hay’addaha sare ee Qaranka, sida Madaxtooyada, Baarlamaanka iyo Xukuumaddiisa.
“Maanta waa maalintii 55-aad ee Xukuumadda Isbedel-doonka ah ee Soomaaliya ka dhalatay, Baarlamaankuna ansixiyay November 16, 2012, Xubnaheeda iyo Barnaamijkeeda Waxqabadka”. “Maanta waxa aan mareynaa kala bar 100-kii maalmood ee ugu horeysay ee Xukuumaddan, Waxaanan doonayaa inaan caddeeyo himilada Xukuumaddeena ee Isbedel-doonka ah.
Ra’iisal Wasaare Saacid waxa uu ku darey:“Marka hore, waxaan ummadda Soomaaliyeed u caddeynayaa in aan ka hortagnay wixii dawladihii hore curyaamin jiray. Waxaa jiri jirtay in khilaafaadyo soo dhexgalaan hay’addaha ugu sareeya Dowladda Sida, Madaxtooyada, Xukuumada iyo Baarlamaanka, wax ka sokeeya Wadajir waxba kuma suurtagali karaan, sidaasi owgeed, waxaan xoogga saarnay midnimada iyo wada shaqeynta saddexdan hay’addood, waxaana u shaqeynaa sida ugu wanaagsan uguna quruxda badan si ay u hirgalaan howlihii Dayacmay ee Dowladda”.
Soo celinta Dawladnimada waxaa saldhig u ah u adeegga Shacabka Soomaaliyeed. Sidaa awgeed Xukuumaddeydu waxay xoogga saartay 100-ka maalmood ee ugu horreeya in ay muujiso in ay shacabka u adeegeyso. Sidaa awgeed, waxaan goostay in aanaan ka bixin dalka gudihiisa mudaddaasi. Waxa aan doonaynnaa in marka hore aan kasbanno kalsoobnida dadweynaha oo aan ku dadaalno waxqabadka iyo baahinta adeegga Dawladda annagoo ku tashanaynna awoodeenna. Marka aad taas muujiso ayuu imaan doontaa taageerada kale ee caalamkuna. Xiriirka Caalamka iyo dalalka Deriska:
“Miiskaan aan fadhiyo waxaan ku qaabilay saddex ruux oo Ajnabi ah oo muddo labo sano ka badan ay afduub u heysteen Burcadu, waxaana idiin cadeynayaa inaan khasab loo soo furan, waxay ku qanceen wadahadaladii dowladdu la sameysay iyada oo aan wax Laaluush ah ama madaxfurasho ah la siinin, waxaanuna sugeynaa inta kale ee harsan dhamaantood la sii daayo”ayuu mar kale yiri isagoo ugu hambalyeeyey maamulka Ximan iyo Xeeb dadaalkii ay u galeen inay Burcad badeeda ka dhaadhiciyaan inay ka tanaasulaan fikirkaasi khaldan.
Abaaraha: “Wallow illaahey nooga raayay Abaarihii iyo dhibkii, balse dadka liita u samafalkiisa waxay noo tahay muhiimada koowaad, dalka gudihiisa iyo Dibadiisa Qaxootiga joogana mar kasta waanu ka fikireynaa”.